fivoriamben’ny vondrona afrikanina : Hiompana feno amin’ ny ady atao amin’ ny kolikoly -
AccueilRaharaham-pirenenafivoriamben’ny vondrona afrikanina : Hiompana feno amin’ ny ady atao amin’ ny kolikoly
02/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Voalohany tamin’ ny tantaran’ i Mauritanie no hampiantrano ireo filoham-pirenena sy mpikambana anatin ny governemanta miisa 55 manoloana ny fivoriamben’ny vondrona afrikanina andiany faha- 31, izay tanterahina ao Nouakchott. Lohahevitra lehibe izay mbola hodinihina dia ny “ny fandresena ny kolikoly, lalana mankany amin’ ny fampandrosoana”, io izay marihina fa mandritra ity taona 2018 ity no handinihina azy. Araka ny fanadihadiana izay navoakan’ ny kaomisiona ekonomikan’ ny vondrona iraisam-pirenena misahana an’i Afrika dia mahatratra 80 lavitrisa Dolara no very isan-taona vokatry ny kolikoly. Tsy izay ihany fa anisan’ny hodinihina lalina ihany koa ny fanavaozana ny famatsiam-bola hampahaleo tena ny vondrona afrikanina, raha ny fanazavana mantsy dia ny 50 % isan-jaton’ ny vola izay ampiasaina dia mbola famatsiana avy amin’ ny firenena ivelany avokoa . Mandritra ity fivoriana andiany faha-31 ihany koa no mbola hitohizan’ny fivoriana sy fandinihina mahakasika ny fametrehana ilay fifanakalozana malalaka eo amin’ ireo firenena anatin’ny vondrona afrikanina.
Marihina fa mandray anjara feno amin’ ity fivoriana andiany faha-31 ny vondrona afrikanina ity ihany koa ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina izay efa tonga tany an-toerana ny marainan’ny faha- 30 ny volana jona teo. Fantatra ihany koa fa misy ireo delegasionina izay miaraka amin’ ny filoham-pirenena malagasy handray anjara amin’ ity fivoriana lehibe ity. Vaovao tsara ihany koa mifanindran-dalana amin’ ity fivoriana andiany faha-31n’ ny volana afrikanina izay tanterahina any Mauritanie ity dia ny nifidianan’ny filankevitra mpanatanteraka ny vondrona afrikanina omaly an’i Narindra Arivelo Ramananarivo ho mpikambana eo anivon’ ny kaomisiona afrikanina mikasika ny lalàna Iraisam-pirenena. Marihana fa i Narindra Arivelo Ramananarivo dia manam-pahaizana mikasika izay lalàna iraisam-pirenena izay, ary izy rahateo ihany koa dia Malagasy faharoa taorian’ i Pr Victor Harison, izy izay lany kaomisera mikasika ny raharaha ekonomika.
Eric Rajaonary Nanohy ny fitsidihana tany Toliara Anisan’ireo mijery akaiky ny tontolo ambanivohitra, ny kandidà Eric Rajaonary. Omaly dia nitsidika tany Toliara ity kandidà laharana faha-17 ity. Toa ny fanaony dia misy hatrany ny fihaonana ...Tohiny